Mid ka Mid ah 5 Nin oo uu Maamulka Puntland ka Qabtay Dekada Boosaaso oo Maanta Geeriyooday – Rasaasa News
Nov 3, 2009 ethiopia, Ogaden, Puntland
Nin ka mid ahaa 5 nin oo uu Maamulka Puntland ka qabtay Dekeda magaalada Boosaaso kana yimid dalka Yemen ayaa Maanta ku geeriyooday Xabsi uu ku xidhnaa waxaana ninkaa lagu magacaabi jiray C/laahi Xasan Cali.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa Somalimirror u sheegay in Ninka dhintay intii uu xanuunsanaa ay ciidankii hayay u diideen in la geeyo goob caafimaad , balse maanta markii ay xaaladiisu sii xumaatay ay ogolaadeen in la geeyo goob caafimaad si loo ogaado xanuunka haya.
Ila Wareedyadaasi waxa ay intaa ku dareen in Saaka ninkaas la geeyay Xarunta Caafimaadka ee Sadex Xidigood ayna dawooyin u qoreen kadibna uu sidaa ku geeriyooday.
Ilahaasi waxa ay intaa raaciyeen in dadkii dhaqay Maydka C/laahi aysan ku arag jidhkiisa wax nabar ah oo muuqan kara , waxaana duhurnimadii maanta lagu soo aasay qabuuraha Biyo kulule .
Wararka la isla dhex marayo ayaa sheegaya in ciidankii goobta caafimaad geeyay C/laahi Xasan Cali ay sheegeen in uu meyd ahaa markii ay goobta caafimaad geeyeen taas oo shiki ka galineysa geeriyada ninkaas oo tibaaxaysa ma gacanta Maamulka ayuu ku dhintay mise intii xarunta la keenay walow warkaas aan la isku haleyn karin jiritaankiisa.
Maamulka Puntland ayaa bilowgii bishii tagtay ee October Dekedda Boosaaso ka qabtay 5 nin oo u dhalatay Gobolka Somaligalbeed (ogaadeeniya) oo xiligaa ka yimid dhanka Yemen , wuxuuna Maamulka Puntland Xukuumada gumeysiga Itoobiya u gacan galiyay mid ka mid ah 5-taa nin taas oo tiradooda u kala qeybineysa mid Itoobiya loo gacan galiyay, mid dhintay , iyo Sadex wali ku jirta gacanta Maamulka Puntland.
Ma jiraan ilaa iyo hadda cid xaqiijineynsa sida uu ku bilowday xanuunka uu u geeriyooday C/laahi , sidoo kale ma jiraan wax maamulka ka tirsan oo ilaa iyo hadda ka hadlay geerida ninkaas.
Isku soo wada duuboo Maamulka Puntland mas’uuliyiin ka tirsan sida C/raxmaan Faroole iyo Maxamed Jaamac Ilka jiir ayaa waraysiyo ay biyeen ku sheegay in ay Itoobiya u gacan galinayaan cidii dambi sida ay sheegaan ka soo gasha ii timaada deegaanada hoos yimaaada Maamulkooda .